खेल र व्यायाम सबै उमेरमा - AjaKoSamachar
खेल र व्यायाम सबै उमेरमा
हामी सबैलाई थाहा छ कि व्यायाम हाम्रो लागि राम्रो छ। तर यसले हाम्रो शारीरिक तन्दुरुस्तीमा सुधार ल्याउँछ। यसले धेरै रोगहरू, जस्तै क्यान्सर, हृदय रोग, वा मधुमेह हुने खतरालाई पनि कम गर्दछ। यसले तनाव कम गर्न मद्दत गर्दछ, हामीलाई राम्रो निद्रामा मद्दत गर्दछ, र यसले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई सुधार गर्दछ। किनकि यसले हाम्रो लागि धेरै गर्छ, व्यायाम गर्नु महत्त्वपूर्ण छ तपाई जस्तोसुकै उमेरको हो। एक जीवनभर व्यायाम कार्यक्रम तपाईंलाई बाँच्न र बुढ्यौलीमा फस्टाउन मद्दत गर्ने निश्चित मार्ग हो।
सुधारिएको स्वास्थ्यको लागि केही सुझाव ।
तपाईको उमेर जतिसुकै भए पनि व्यायाम तपाईको लागि राम्रो छ। यसले बच्चाहरूलाई स्कूलमा राम्रोसँग काम गर्न मद्दत गर्दछ। यसले तपाईंको उमेरको रूपमा मस्तिष्क शक्ति बढाउन मद्दत गर्दछ। यसले तपाईको उमेरमा गिरावट रोक्न मद्दत गर्दछ। एक व्यक्तिको जीवनको प्रत्येक चरणमा व्यायामको लागि ठाउँ छ।
धेरै बच्चाहरू प्राय: व्यायाम उनीहरूको आवश्यक हुन्छ केवल बच्चाहरू भएर। तिनीहरू वरिपरि दगुर्छन्, चढाई र खेल मैदानमा खेल्छन्, ट्याग खेल्छन्, र अन्य धेरै गतिविधिहरू गर्छन्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको बच्चासँग हरेक दिन दौडने, हाम फाल्ने र खेल्ने प्रशस्त अवसरहरू छन्। तिनीहरू दिनको कम्तिमा १ घण्टा शारीरिक गतिविधि हुनु पर्छ।
धेरै किशोरीहरू खेल खेल्नमा रुचि राख्छन्। यो उनीहरूको स्कूलको लागि वा मनोरन्जन कार्यक्रम मार्फत हुन सक्छ। उनीहरूको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्नुहोस् ताकि तिनीहरू सक्रिय हुन सकून्। यदि तिनीहरू एक संगठित खेल खेल्न चाहँदैनन्, तिनीहरू साथीहरूसँग बाइक चढाउन वा यार्डमा फुटबल खेल्न सक्छन्। साना बच्चाहरू जस्तै उनीहरूलाई सक्रिय बन्ने अवसर दिनुहोस्। किशोरहरूलाई पनि कम्तिमा १ घण्टा शारीरिक गतिविधि आवश्यक पर्दछ।
जब तपाईं 20s मा हुनुहुन्छ, तपाईंको शरीर बलियो र लचिलो हुन्छ। फिटनेसको जग निर्माण गर्न यो उत्तम समय हो। व्यायामलाई बानीको रूपमा विकास गर्नुहोस्। यसलाई तपाईंको जीवनको नियमित भाग बनाउनुहोस्। तपाईंको उमेर बढ्दै जाँदा यसलाई राख्न यो सजिलो हुनेछ। टेनिस वा रैकेटबल जस्ता साथीहरूसँग खेल खेल्नुहोस्। पैदल यात्रा वा साइकल यात्रामा जानुहोस्। तपाईका विकल्प अनन्त छन्। तपाईले हप्तामा ३० दिन कम्तिमा ३० मिनेट व्यायाम गर्नु पर्ने हुन्छ। यो पनि याद गर्नुहोस्, तपाइँको उमेर अनुसार, तपाइँ मांसपेशी र हड्डीको शक्ति गुमाउनुहुन्छ। त्यसोभए निश्चित गर्नुहोस् अब आफ्नो तालिकाको भागको रूपमा शक्ति प्रशिक्षण। यस तरीकाले सडकको एक सानो मांसपेशीलाई हराउँदा त्यसले तपाईलाई चोट पुर्याउने छैन। तपाईको दिनचर्यामा हप्ताको २ देखि ३ दिन मांसपेशीहरूलाई सुदृढ पार्ने व्यायामहरू समावेश गर्ने लक्ष्य राख्नुहोस्।
50s – तपाईको 50s को दशकमा तपाईले दैनिक आधारमा बढि दुखाइ र पीडा अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई व्यायाम गर्नबाट रोक्नुहोस्। केवल तपाइँको व्यायाम कार्यक्रम अनुकूल गर्नुहोस्। कम प्रभाव गतिविधिहरू जस्तै हिड्ने, बाइक चलाउने, वा पौडी खेल्नेहरू सामान्यतया तपाइँको जोर्नीहरूमा सजिलो हुन्छ। तपाईं जोसिलो workouts पछि पनि गम्भिर हुन सक्छ। तीव्रता कम गर्न कोसिस गर्नुहोस् र अधिक सट्टामा व्यायाम गर्नुहोस्। यस समयमा, तपाईले अगाडि घुमाउनको लागि आफ्नो शरीरको प्राकृतिक प्रवृत्तिसँग पनि लड्नु पर्छ। तपाईंको पेट र तपाईंको पछाडि मांसपेशीहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेर तपाईंको कोर मजबूत गर्नुहोस्। यसले तपाईंको शरीरलाई स्ट्रेटर खडा गर्न र बक्रमा लड्न मद्दत गर्दछ
मलाई कति व्यायाम चाहिन्छ?
अमेरिकाको स्वास्थ्य र मानव सेवा विभागले अमेरिकीहरूका लागि शारीरिक गतिविधि दिशानिर्देशहरू स्थापना गर्दछ। सबैभन्दा भर्खरका दिशानिर्देशहरू निम्नानुसार छन्:
बच्चाहरू र किशोर-किशोरीहरू
६ देखि १७ वर्ष उमेरका बच्चाहरूले कम्तिमा १ घण्टा शारीरिक गतिविधि प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ। त्यो एक धेरै जस्तो लाग्न सक्छ, तर तिनीहरू सायद पहिले नै आफ्नो दैनिक गतिविधिहरूमा कि धेरै पाउँदैछन्। यसमा अवकाश, जिम कक्षा, वा स्कूल पछि साथीहरूसँग वरिपरि घुम्न समावेश हुन सक्छ।
वयस्कहरूले नियमित आधारमा दुबै एरोबिक र मांसपेशी-सुदृढीकरण व्यायाम गरिरहनुपर्दछ। प्रत्येक हप्ता, वयस्कहरूलाई चाहिन्छ २ घण्टा ३० मिनेटमध्यम गहन व्यायाम प्लस मांसपेशीहरूको सुदृढीकरण आवश्यक छ।
Previous articleयुवा: कसरी स्वस्थ रहने
Next article१० वर्ष पछि परिवर्तन हुदै विकिपेडियाको डिजाइन
अन्य आजको समाचार एडिटर - September 25, 2020 0
एक व्यक्तिको सम्पूर्ण स्वास्थ्य रोगको अनुपस्थिति भन्दा बढी हो। यो शारीरिक, मानसिक, र सामाजिक कल्याणको राज्य हो। अन्तमा, यो एक उत्पादक र सन्तोषजनक जीवन...
हाम्रो भान्छामा नै छन् सौन्दर्यका यी १२ सामाग्री
अन्य आजको समाचार एडिटर - September 19, 2020 0
चम्किलो, मुलायम, सुकिलो कसरी बनाउने ? संभवत यही प्रश्नले लखेटेर तपाईलाई कहिले ब्युटी पार्लर पुर्‍याउँदो हो वा कस्मेटिक्स बजारमा । सौन्दर्य बढाउने अनेक कृतिम उपाय...